चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन सम्भव | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन सम्भव
on: २९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:२५ मुख्य खबर, समाचार
चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन सम्भव
काठमाडौं (अस) । काठमाडौंको चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनको सम्भावना देखिएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे कन्ष्ट्रक्शन कर्पोरेशन (सीआरसीसी)ले ३ महीना लगाएर गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–फिजिबिलिटी स्टडी)ले उक्त रूटमा मोनोरेल चलाउन सम्भव देखाएको हो । कर्पोरेशनले बिहीवार ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिलाई उक्त अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा चक्रपथमा आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र भौगोलिकलगायत दृष्टिकोणले मोनोरेल सञ्चालनको सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । २७ दशमलव २ किलोमिटर लामो चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न रू. १ खर्ब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
मोनोरेलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न ६ महीना लाग्ने र ३ वर्षमा निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले उक्त प्रतिवेदन करीब १५ दिन अध्ययन गरेपछि निष्कर्षमा पुग्न सकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘सम्भाव्यता र अन्य प्राविधिक विषयमा जाँचबुझ गरी डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
मोनोरेल रेलकै एक प्रकार हो । साधारण रेलभन्दा सानो आकारमा हुने यसले एकपटकमा १५ हजारदेखि २० हजारसम्म मान्छे बोक्न सक्छ । प्रतिवेदनका अनुसार चक्रपथमा मोनोरेलका १७ स्टेशन हुनेछन् । यस्तै, उक्त रूटमा प्रतिघण्टा ८० देखि १०० किमी कुद्ने विद्युतीय मोनोरेल निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ । यद्यपि, डीपीआर बनेपछि यसमा परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ ।
कसरी बन्दै छ ?
मोनोरेल कसरी बनाउने भन्ने यकीन नभए पनि कम्पनीले ‘प्रोक्योरमेण्ट, कन्ष्ट्रक्शन एण्ड फाइनान्सिङ’ मोडलमा बनाउने आशय व्यक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार ईपीसीएफ मोडलमा बनाउँदा सबै प्राविधिक तथा आर्थिक खर्च कम्पनी आफैले बेहोर्नुपर्छ । यद्यपि, त्यो खर्च नेपालले विस्तारै तिर्दै जानुपर्छ ।
Monorail le एकपटकमा १५ हजारदेखि २० हजारसम्म मान्छे बोक्न सक्छ ??? Are you kidding??
Monorail le ek Latakia ma 15 hajar dekhi 20 hajar samma Manchester Bonnard sakchha ??? Are you kidding??